Gore kwuru banyere mgbanwe Mgbasa mgbasa ozi | Martech Zone
Ruth Holladay's blog taa na-arụtụ aka isiokwu na N'ajụjụ ọnụ Al Gore ma jụọ echiche ya banyere mgbasa ozi. Kpọmkwem, onye na-agba ajụjụ ọnụ na-ajụ Gore maka mkpokọta mgbasa ozi, ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị gọọmentị (mba ụwa). Gore kwuru, sị:
Ochichi onye kwuo uche ya bụ mkparịta ụka, ọrụ kachasị mkpa nke mgbasa ozi bụ ịkwado mkparịta ụka ahụ nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Ugbu a mkparịta ụka a na-achịkwa ya, ọ na-etinyere ya karịa. - Al Gore
Chaị. N’abụghị onye ofufe nke Gore, ọ tụrụ m n’anya nke ukwuu ma na-enwe obi ụtọ na ozi ya ebe a. Abụ m n'ezie otu n'ime ụmụ okorobịa ahụ kwenyere n'ezie na mgbasa ozi eme gbalịa imetụta ọdịdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị.
Ekwela ka m mehie… Echeghị m na mgbasa ozi bụ ụyọkọ nke nku aka ekpe na oku ekwentị na-achọ ịchụpụ ndị Republicans, naanị m na-eche na ọtụtụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi na ebe ntụrụndụ nwere ndụ ndị dị iche karịa anyị niile. N’ihi ya, echiche ha banyere ụwa na-adị iche. Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na ha gụrụ akwụkwọ nke ọma ma nọrọkwa n'ọkwá dị elu n'ikike ha na-ekwu okwu, ha nwere okwu mkparị iji mee ka echiche ndị mmadụ gbanwee.
Gingde blọgụ na Internetntanetị na-agbanwe ọdịdị ahụ. Mgbe m debanyere aha na akwụkwọ akụkọ 2 ruo ihe karịrị afọ iri, anaghị m ewere ya ọzọ. Agụrụ m ozi m niile na ntanetị, wee gụọ mmeghachi omume blogosphere na akụkọ ahụ. Ọtụtụ mgbe, amalitere m ịhụ ozi ndị ọzọ na-ede blọgụ karịa akwụkwọ akụkọ. Echere m na otu n'ime ihe kpatara ya bụ na ịde blọgụ na-ewepụ 'nzacha' nke ozi ahụ.
Nke Rut blog bụ a kediegwu atụ nke a. A tọhapụrụ Ruth site na agbụ nke onye editọ ya na blọọgụ ya na-akụda ụzọ ya n'ihu nke ihu ala ịde blọgụ Indiana. Ahụrụ m ya n'anya. Mgbe m gụsịrị akụkọ Ruth ruo ọtụtụ afọ, ahụghị m agụụ na ozi ọkụ ya ruo mgbe ọ lara ezumike nká wee bido ịde blọgụ. Ruth dị ka ehi nke gbapụrụ n'ụlọ ahịa china! Enwere m ike ikwenye na ozi ya oge ụfọdụ, mana enweghị m ike ichere ịgụ ya na-esote.
Olileanya m bụ na willntanetị ga-anọgide na-abụ ụzọ ọhụrụ iji "kwado mkparịta ụka nke ọchịchị onye kwuo uche ya". Enwere m olile anya na ọ na-enye ndị na-enweghị olu okwu igwe okwu igwe na ụwa anyị na ebe a n’obodo anyị. Okwu dị na peeji dị ike… ọkachasị mgbe anaghị achịkwa ya.
Ogologo ndụ free free!